October 14, 2021 - Channel Lover
ည၈နာရီကျော်လောက်ကသင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ကိုရင်လေးက ချိုစိမ့်နဲ့ပဲနံပြားပါဆယ်ဆွဲပြီး သင်္ချိုင်းကုန်းထဲဝင်သွားလို့လိုက်ကြည့်လိုက်သောအခါ
ည၈နာရီကျော်လောက်ကသင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ကိုရင်လေးက ချိုစိမ့်နဲ့ပဲနံပြားပါဆယ်ဆွဲပြီး သင်္ချိုင်းကုန်းထဲဝင်သွားလို့လိုက်ကြည့်လိုက်သောအခါ မနေ့ည၈နာရီကျော်ကျော်ဆလောက်ကကျနော်လက်ဖက်ရည်သောက်ဖို့သောက်နေကျဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်… ထိုင်ခုံကမရှိတော့ကိုရင်လေးထိုငိနေတဲ့စားပွဲမှာပဲဝင်ထိုင်လိုက်တယ်စားပွဲထိုးကောင်မလေးကကျနော့်အတွက်… လက်ဖက်ရည်ခွက်ချပေးနေတုန်းကိုရင်လေးကမေးလိုက်တယ်…. ဒကာမလေးးကိုရင်မှာထားတာကြာပီလေမရသေးဘူးးလားတဲ့… ကျနော်လည်းးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်မေးလိုက်မိတယ်…ကိုရင်ကဘာမှာထားတာလဲလို့…ချိုစိမ့်နဲ့ပဲနံပြားမှာထားတာ… အဲဒါနဲ့ကျနော်လည်းးပြန်မေးလိုက်တယ်…..ကိုရင်ကဒီအချိန်စားလို့မရဘူးလေဆိုတော့….မဟုတ်ဘူးး အမေ့အတွက်တဲ့…လက်ဖက်ရည်ခွက်ချပေးနေတုန်းကိုရင်လေးကမေးလိုက်တယ်… ဒကာမလေးး ကိုရင်မှာထားတာကြာပီလေမရသေးဘူးးလားတဲ့ …..ကျနော်လည်းးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်မေးလိုက်မိတယ်… ကိုရင်က ဘာမှာထားတာလဲလို့ … ချိုစိမ့်နဲ့ပဲနံပြားမှာထားတာ …. အဲဒါနဲ့ကျနော်လည်း ပြန်မေးလိုက်တယ်…။ ကိုရင်က ဒီအချိန်စားလို့မရဘူးလေဆိုတော့ …. မဟုတ်ဘူးး အမေ့အတွက်တဲ့ ….. မြို့ရှောင်လမ်းထဲရောက်တော့ ဘယ်ဘက်ကိုချိုးဝင်ခိုင်းတယ် ပြီးတော့ သင်္ချိုင်းကုန်းထဲဝင်ခိုင်းတယ်ဗျာ…. ကျနော်တော်တော်လန့်သွားတယ် ညက ၈ နာရီကျော်ပီလေ….. သင်္ချီုင်းကုန်းဆိုတာ တိတ်ဆိတ်နေတာ ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်းထလာတယ် ဒါပေမယ့်ကျနော်ကြောက်စိတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့ သင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ကိုရင်လည်း ပါတယ်ဆိုပီး အားတင်းဝင်လိုက်တယ်… အဲဒီမှာကိုရင်ကဆင်းပီး ဓါတ်မီးလေးနဲ့ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ပြီး….. အုပ်ဂူလေးးတစ်လုံးပေါ် တက်ထိုင်ပြီး… အမေအမေကြိုက်တဲ့ ချိုစိမ့်ရယ် ပဲနံပြားရယ် …. သားလာပို့တာပါ … Read more
မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ အိုး တင် ရင် တွေကြည့်ပြီး အပျိုစစ်လား မစစ်လား ဝေဖန်နေကြတဲ့ တစ်ချို့ လူတွေ ဖတ်ဖို့…
မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ အိုး တင် ရင် တွေကြည့်ပြီး အပျိုစစ် လား မစစ်လား ဝေဖန်နေကြတဲ့ တစ်ချို့ လူတွေ ဖတ်ဖို့………..။ ယောက်ျားဆိုတာ မယုတ်မာ ဖို့ပဲ လိုတာပါမိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ တင် ရင် တွေကြည့်ပြီး အပျိုစစ်လား မစစ်လား ဝေဖန်နေတဲ့ တစ်ချို့ကောင်တွေမင်းတို့ရော လူပျိုစစ် ရဲ့လားရမလား စမ်းတာ ယောက်ျား သ ဘာဝလို့ မပြောပါနဲ့အဲ့ဒီစကား တစ်ခွန်းကြောင့် မိန်းကလေးပေါင်း များစွာရဲ့ အရှက် သိက္ခာ နစ်နာမှုတွေ ဘယ်လောက် များပြီးလဲ ကိုယ်ချင်းစာမိ ရဲ့လား အိုင်တွေ့လို့ ခြေဆေးမယ် ဆိုကတည်းက ကိုယ်ခြေထောက်ကနဂိုက တည်းက မသန့်လို့ပဲ ဆိုတာ သိထားပါ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က နှမချင်းစာနာတတ်တဲ့ စိတ် … Read more
(၇)ရက်သားသမီးများအတွက် ဆရာဇင်ယော်နီ၏ တစ်ပါတ်စာ စောစာတမ်း
မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်းပါ။ (အောက်တိုဘာ ၁၃ မှ ၁၉) ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော်ဝ် … #ဇင်ယော်နီ #မနောမယဂမ္ဘီရဂျာနယ် တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် ဟောစာတမ်း တနင်္လာ သားသမီးများအတွက် ဟောစာတမ်း အင်္ဂါ သားသမီးများအတွက် ဟောစာတမ်း ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများအတွက် ဟောစာတမ်း ကြာသပတေး သားသမီးများအတွက် ဟောစာတမ်း သောကြာ သားသမီးများအတွက် ဟောစာတမ်း စနေ သားသမီးများအတွက် ဟောစာတမ်း unicode မိတျဆှတေို့ ခြိနျဆနိုငျရနျ တဈပတျစာ မနောမယဟောစာတမျးပါ။ (အောကျတိုဘာ ၁၃ မှ ၁၉) ကံ ဉာဏျ ဝီရိယ သုံးခကျြလုံးအားကောငျးအောငျ ကွိုးပမျးတျောမူနိုငျကွပါစသေျောဝျ … #ဇငျယျောနီ … Read more
👩‍❤️‍👨တောတွင်းတစ်နေရာမှ တော်လှန်ရင်း ဖူးစာဆုံခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာအခမ်းအနား ပုံရိပ်များ👩‍❤️‍👨
တောတွင်းတစ်နေရာမှ တော်လှန်ရင်း ဖူးစာဆုံခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာအခမ်းအနား ပုံရိပ်များ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ လိုရင် တိုရှင်းပြောရရင်တော့ မောင်နဒီစစ်အောင်နှင့် မကေခိုင်တို့ဟာဆိုရင်ဖြင့် စစ်အာဏာရှင်ကို တော်လှန်ရင်းနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ကြတာပါပဲ ဖြစ်ပါတယ်…။ စစ်အာဏာရှင်ကို အမြစ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ စိတ်တူ ၊ ကိုယ်တူ ဆုံးဖြတ်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ကြရင်း တောတွင်းတစ်နေရာမှာ ဖူးစာဆုံကြတာပါ။။ မင်္ဂလာပွဲလေးဟာ ဆိုရင်တော့ သူများတွေလို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မရှိခဲ့ပေမယ့်လဲ အရာရာအားလုံး အဆင်ပြေချောမွေ့စွာနဲ့ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တော်လှန်ရေးဖူးစာလို့ တင်စားပီး ဖော်ပြရင်းနဲ့ ဒီလင်၊ ဒီမယား အိုအောင်၊ မင်းအောင် ပေါင်းသင်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ… Photo-crd unicode တောတှငျးတဈနရောမှ တျောလှနျရငျး ဖူးစာဆုံခဲ့တဲ့ မင်ျဂလာအခမျးအနား ပုံရိပျမြား ပရိတျသတျကွီးရေ လိုရငျ တိုရှငျးပွောရရငျတော့ မောငျနဒီစဈအောငျနှငျ့ မကခေိုငျတို့ဟာဆိုရငျဖွငျ့ စဈအာဏာရှငျကို … Read more
အနုပညာရှင်တစ်ချို့ ထောင်ကျနေချိန်မှာ နေပြည်တော်တွင် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပနေတဲ့ တပ်ထောက်ခံအားပေးသူ အနုပညာရှင်များရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်
ပရိသတ်ကြီးရေ ဖေဖော်ဝါရီ အာဏာသိမ်းစဉ်ကာလတည်းကနေ အခုချိန်ထိတိုင် အာဏာရှင်တွေကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ အများအပြားရှိနေတာပါ။ သူတို့တွေထဲက နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တစ်ချို့ကတော့ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ထုတ်ခံရပြီး မကြာခင်မှာပဲ အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်နော်။ တစ်ချို့မှာလည်း ဘေးကင်းရာသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရင်း လွတ်မြောက်နယ်မြေကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာလည်းပင်ပန်းဆင်းရဲစွာဒုက္ခခံပြီး စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာ နာမည်ကြီးအနုပညာတစ်ချို့ဟာ ဒုက္ခခံပြီး တိုက်ပွဲဝင်နေကြပေမယ့်တစ်ချို့အနုပညာရှင်တွေကတော့ လွတ်လပ်စွာသောက်စား ပျော်ပါးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနုပညာရှင်တွေထဲမှာမှာ ညစာစားပြီးသောက်စားပျော်ပါးနေတဲ့လူတစ်စုလည်းရှိနေပါတယ်။သူတို့ကတော့ နာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ စိုးသူ၊စိုးမြတ်န္ဒာနဲ့ခန့်စည်သူတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ နေပြည်တော်ကဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာပျော်ရွှင်မြူးထူးစွာ သောက်စားပျော်ပါးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဒီဗီဒီယိုဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ လပိုင်းလောက်က တင်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်လို့လည်းလူမှုကွန်ရက်မှာပျံ့နှံနေတာပါ။ပရိသတ်တွေလည်း အောက်က ပျော်ပါးနေတဲ့video လေးကြည့်ပြီးဝေဖန်ပေးကြပါဦးနော်။ unicode ပရိသတျကွီးရေ ဖဖေျောဝါရီ အာဏာသိမျးစဉျကာလတညျးကနေ အခုခြိနျထိတိုငျ အာဏာရှငျတှကေို ဆနျ့ကငျြဆန်ဒပွခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတှေ ရုပျသံကို အောကျဆုံးတှငျ … Read more
သင်ညအိပ်ရင် ဘယ်ဘက်ကို စောင်းအိပ်တတ်တဲ့ သူတစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ ထီပေါက်တာထက် ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိသွားပါပြီဘာကြောင့် ဒီလိုမေးရသလဲဆိုတော့ သင်ရဲ့အိပ်စက်ပုံဟာ သင်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက် အရမ်းကိုအရေးတကြီး ပတ်သက်နေလို့ပါပဲ။အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့ ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်လေ့မရှိရင်တော့ အခုဖော်ပြသွားမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို အဆုံးထိဖတ်ကြည့်ရင်း ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ဖို့ သင်ကြိုးစားလာပါလိမ့်မယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်ဘက်သို့စောင်းအိပ်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေနဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ အခြားသောအရာဝထ္တုတွေကို ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ဖယ်ရှားသွားအောင် ကူညီပေးနိုင်လို့ပါပဲ ဒီလို ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အညစ်အကြေးတွေသာမက ဦးနှောက်ထဲက ဓာတုအညစ်အကြေးတွေကိုလည်း ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်ခြင်းဖြင့် ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဆီမှာ နှလုံးပြဿနာရှိနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ခြင်းက သင့်ကိုကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ခြင်းက နှလုံးသွေးလည်ပတ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ရင်ပူခြင်းဝေဒနာ ခံစားနေရသူတွေအနေနဲ့လည်း ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ညာဘက်ကိုစောင်းအိပ်ခြင်းက ဒီဝေဒနာကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပြီး ဘယ်ဘက်ကို ဆယ်မိနစ်ခန့်လောက် စောင်းအိပ်လိုက်ရုံနဲ့တင် ရင်ပူခြင်းမှသက်သာသွားစေနိုင်ပါတယ်။ … Read more
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကို ရစရာမရှိအောင်ပြောလိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို
ဘဝမှာ ငတုံးအတော်များများကို မြင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဂျပုတော်တော်များများကိုလည်း မြင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းအောင်လှိုင်လောက် တုံးတဲ့ ဂျပုမျိုးတော့ တစ်ခါမှကို မမြင်ဖူးတာ။ တကယ်တမ်းမှာ မင်းအောင်လှိုင် ရရှိခဲ့တဲ့ နေရာနဲ့ အခြေအနေက အခုလို တစ်နိုင်ငံလုံး ရွံရှာမုန်းတီးပြီး တံတွေးခွက်ထဲ ပက်လက်မျောတဲ့ သမိုင်းတရားခံ လူသတ်ကောင်တစ်ကောင် ဖြစ်လာစရာကို အကြောင်းမရှိတာ။ မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ ပါးနပ်မယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီဖခင်ကြီးတောင် ဖြစ်သွားနိုင်တာ။ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကလည်း နောင်ဆယ်သက် ထိုင်စားလည်း မကုန်နိုင်။ စစ်တပ်ဘက်က တဇောက်ကမ်းတွေ ခံသာအောင် စစ်တပ်ကို နိုင်ငံရေးဘက်ကနေ တဖြည်းဖြည်း စွန့်ခွါလို့ရအောင် လမ်းကြောင်းပေး။ ပြည်သူတွေက တဖြည်းဖြည်း ဖေဖေပုတွေ ဘာတွေဖြစ်လာ၊ ပင်စင်ယူ ပါတီထောင်၊ မဲဝင်ပြိုင် သမ္မတလုပ်။ ကဲ…. ခေတ်အဆက်ဆက် အာဏာသိမ်းပြီး ပြည်သူပေါ်နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ စစ်တပ်ဟာ အရပ်သားအစိုးရတက်လာတဲ့ … Read more
အဖွား၏ပေါင်ပေါ်မှာ လူသားတစ်ဉီးလို အိပ်ပြီးချွဲနွဲ့တတ်တဲ့ ကျွဲလေးအကြောင်း
စာဖတ်သူပရိတ်သတ်ကြိးတွက် ယခုဖော်ပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ Yi Choi အမည်ရှိ အသက် ၆ နှစ်အရွယ် ထက်မြက်တဲ့ ကျွဲတစ်ကောင် နဲ့ အသက် ၈၂ နှစ်အရွယ် Saen Khamchanachai အမည်ရှိ အဖွားတို့ဟာ လူနဲ့ တိရိစ္ဆာန်တို့အကြား ချစ်စရာကောင်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ် ။ Yi Choi ဟာ ကျွဲတစ်ကောင်နဲ့ပင်မတူဘဲ လူသားကလေးတစ်ယောက် နဲ့တူတယ်လို့ ပြောရလောက်အောင် အဖွားရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာ အိပ်စက်ပြီး နို့ဘူးစို့နေခဲ့တာပါ ။ ပိုထူးဆန်းက Yi Choi ဟာ မနက်တိုင်း စောစောစီးစီး အဖွားရဲ့ ပေါင်ပေါ်မှာ အိပ်လေ့ရှိပါတယ် ။ Yi Choi ရဲ့အမေက ကလေးတွေကို စိတ်မဝင်စားတာကြောင့် ကလေးကိုနို့မတိုက်ရန်ငြင်းဆန်သဖြင့် Yi Choi က လူတို့နဲ့ … Read more
ဝက်လက်နှင့်စဉ့်ကိုင်တို့တွင် စစ်ကောင်စီသတင်းပေးဟု သတ်မှတ်ခံထားရသူများ ၏ မိသားစုများအပါအဝင် စုစုပေါင်း ၆ ဦး ပစ်သတ်ခံရ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဝက်လက်မြို့နယ်နှင့် မန္တလေးတိုင်း၊ စဉ့်ကိုင်မြို့တို့တွင် စစ်ကောင် စီသတင်းပေးဟု သတ်မှတ်ခံထားရသူများ၏ မိသားစုဝင်များအပါ အဝင် စုစုပေါင်း ၆ ဦး သတ်ဖြတ်ခံရကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရှိရသည်။ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ရှိမ်းမကားကျေးရွာမှ စစ်ကောင်စီသတင်းပေးဟု အများက သတ်မှတ်ခံထားရသူ သိန်းတန် နှင့် ရီသန့်တို့ ၂ ဦးကို ယနေ့ ဝက်လက်-ရှိမ်းမကားလမ်း တစ်နေရာတွင် ပစ်ခတ်လိုက်ပြီး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားကြောင်း ဝက်လက်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်က သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။ အလားတူ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် ၊မီးသွေးဘုတ်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ကင်းတုံရွာသား စစ်ကောင်စီသတင်းပေးဟု အများက သတ်မှတ်ခံထားရသူ ခင်မောင်ချိုအိမ်ကို လက်နက်ကိုင်တချို့က ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီး ခင်မောင်ချိုအပါအဝင် … Read more
ပြည်သူတွေအပေါ် သစ္စာဖောက်သွားတဲ့ ဒလန်မလေး ဒေါက်တာအေးငြိမ်းအကြောင်းစုံ
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်မှစပြီးဒေါက်တာအငြိမ်းကိုအလှူငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိ.မ်ညာခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲပြောဆိုတာတွေရှိလားခဲ့ပါတယ်။ ထိုစွပ်စွဲချက်တွေဟာ အလိမ်အညာသပ်သပ်သာ မဟုတ်ဘဲ အမှန်တွေဆိုတာ ပြည်သူတစ်ဦးကဖော်ထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။ ထိုအလှူအငွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့လည်း KNDF သည် ဒေါက်တာအငြိမ်းထံမှတစ်ဆင့် HealtheWorld အဖွဲ့ထံ ထောက်ပံ့ငွေများနှစ်ကြိမ်တိတိ လက်ခံခဲ့သည်ဖြစ်ကြောင်းကို KNDF မှလည်း ကြေငြာခဲ့ဖူးပါတယ်။ ထိုကြေငြာချက်တွေက အလိမ်အညာတွေဖြစ်တယ်လို့လည်း သတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ KNUတပ်မဟာ၂နဲ့ တပ်မဟာ၇က တပ်သားတွေလဲပြောတယ်။ အငြိမ်းလှူတယ်လို့ပြောခဲ့တာတွေ တကယ်မရဘူး။ အငြိမ်းကတော်လှန်ရေးမှာ အဖျက်သက်သက်ဝင်လာတာ။ အငြိမ်းက သူ့ကိုလှူတဲ့ထဲက ၂၀-၂၅%လောက်ပဲပြန်လှူခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြန်လှူတဲ့အထဲမှာCDFကိုလုံးဝမလှူဘူးလို့သိရပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်ကို ထိုးစစ်ဆင်ဖို့၉ရက်နေ့ကမှ ညွှန်ကြားချက်ထွက်တာဖြစ်ပြီး ၆ ရက်နေ့မှာပဲ အငြိမ်းက သူအပ်ထားတဲ့ ရွှေတုံးကို လူလွှတ်ယူခိုင်းတယ်။ ၁၀ရက်နေ့မှာမန္တလေးကနေ ကယားဘက်ကိုသွားတယ်လို့ကြားတယ်။ အငြိမ်းကဒလန်ပဲ။ HealtheWorld ဂရုထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေလဲ လိပ်ပြာလုံနိုင်ကြပါစေ” အငြိမ်းကို ငါစဖော်တော့ငါနဲ့ သိတဲ့စရဖက ချက်ချင်းလှမ်းပြောတယ်။ အခုလုပ်နေတာကို ဆက်လုပ်မယ်ဆို သတိထားပါ။ ဘယ်သူမှ သိပ်မသိတဲ့နေရာရွှေ့ပါပြောလို့ … Read more